I-Attic - Iziko leSixeko - I-Airbnb
I-Attic - Iziko leSixeko
Dundee City, Angus, United Kingdom
Wamkelekile kwindawo yethu enesitayile kunye nekhaphukhaphu ekumgangatho ophezulu entliziyweni yeDundee. Iflethi yethu ikuhambo lwemizuzu nje ukusuka ezivenkileni, kwiimyuziyam, kunye nonxibelelwano lwezothutho. Siyathemba ukuba uyonwabela i-attic yethu entle enembono yeDundee!
• amagumbi amabini okulala (enye kabini, enye ikumkani)
• ikhitshi elikhulu elinetafile yokutyela
• igumbi lokuhlambela elikhanyayo, elitsha elinesinki enye yohlobo
• igumbi lokuhlala eliphangaleleyo (nebhedi yesofa)
Esi sisakhiwo senkulungwane ye-19 kwaye iflethi inebali! Ndingakhange ndichukunyiswe phantse iminyaka eyi-100, ndisebenze ngokuzimisela ukubuyisela iflethi ndisebenzisa kangangoko iimpawu zantlandlolo.
4.90 · Izimvo eziyi-152
IDundee yindawo entle yokutsala abakhenkethi, ukutya, kunye nokuthenga. Iyahambelana nenkcazo ye "15-Minute City": yonke into oyifunayo kwimizuzu eli-15! IDundee ineendawo ezintle zabahambi ngeenyawo ezizaliswe ziivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, ii-pubs kunye neevenkile. IDundee ngokwenene lilitye elinqabileyo!
Zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi zaseDundee zikumgama wokuhamba weflethi yethu:
• Inqanawa yokuFumana
• Iholo yaseCaird
• Iigadi zeSlessor
• Imidlalo yamanzi eFoxlake
• IMcManus Art Gallery
• IYunivesithi yaseDundee kunye neYunivesithi yaseAbertay
Kuninzi okufuneka uphonononge kwaye wenze eDundee!
Ndiza kufumaneka ngefowuni okanye ngetekisi kwaye ndiya kukuvuyela ukunceda kwaye ndinike iingcebiso okanye ulwazi malunga nezinto eziluncedo zasekhaya okanye umtsalane, ndisebenza kufutshane ukuze ndingabinangxaki ukunceda.